Barnaamijyada qiyaasta ugu wanaagsan ee lagu guuleysto barkadaha | Androidsis
Barnaamijyada qiyaasta ugu fiican ee lagu guuleysto barkadaha
Qolka Ignatius | | Codsiyada Android
Dhammaanteen waxaan jeclaan lahayn in mar uun uusan ciyaarin bakhtiyaanasiibka, qadiimiga ah ama xitaa barkadda xitaa haddii kan uu yahay kan bixiya abaalmarinta ugu yar. Haddii aad ka daashay ku ciyaarista barkadda toddobaad kasta oo aad hesho natiijooyin aad u yar, Waa waqtigii la beddeli lahaa xeeladaha.
Dukaanka Play -ka waxaan ku haysannaa codsiyo kala duwan oo ah way ina caawin doonaan markaan dhigano sharadkayaga. Laakiin marka lagu daro, qaar xitaa waxay noo oggolaadaan inaan ku sameyno taleefankeenna gacanta, annagoo aan ka tagin guriga, iyo sidoo kale inaan ururinno abaal -marinnada haddii aan nasiib u yeelanno in nala abaalmariyo.
Tirada codsiyada naga caawin doona inaan samayno barkadda toddobaadlaha ah ee dukaanka Google aad bay u sarreeyaan. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah iyaga ka mid ah in ka badan hal sano oo aan la cusbooneysiin, marka waxaan si toos ah uga tuuray liiskan.
Halkan waxaan ku tusaynaa codsiyada ugu fiican Android iyo websaydhada si loo sameeyo barkadaha iyada oo loo marayo qiyaasaha, codsiyada la cusbooneysiiyay 2021 -ka oo dhan, sidaa darteed ma aysan ka tagin soo -saaraha waxayna bixiyaan xog la cusbooneysiiyay mar walba.
1.1 Maxay Quinidroid na siiso
2.1 Maxay Quiniela na siiso
4 El Quinielista (shabakadda)
5 EduardoLosilla.es (shabakad)
Iyada oo in ka badan 100.000 la soo dejisto iyo celcelis ahaan dhibcaha 4,6 xiddigood oo ka mid ah 5 suurogal ah waxaan helnaa Quinidroid, codsi kaliya uma oggolaanayo inaan hubinno natiijooyinka barkadaha, laakiin sidoo kale inaan abuurno iyaga oo u mahadcelinaya saadaasha rasmiga ah taas oo aysan siinayn marin.
Maxay Quinidroid na siiso
Maamul dhammaan noocyada barkadaha, kuwa fudud, xitaa kuwa la dhimay iyada oo loo marayo kuwa shuruudaha leh iyo tirooyinka.
La socodka tooska ah ee ciyaaraha maalinta, taas oo noo oggolaaneysa inaan si toos ah u hubinno guulaha iyo guul darrooyinka sharadkayaga.
Fiiri taariikhaha, waqtiyada iyo kanaalada baahiya cayaaraha maalinta xigta.
Ogeysiisyo leh goolashii iyo natiijooyinkii ugu dambeeyay ee cayaaraha.
Waxay na siineysaa marin u helidda saadaasha kulamada maalinta.
Xisaabinta abaalmarinta aan helno marka loo eego guulaha.
Waxay noo oggolaanaysaa inaan dhoofinno oo soo dejinno barkadaha iyo sidoo kale inaan la wadaagno saaxiibbadeenna.
Waxay leedahay qayb lagu maareeyo naadiyada saaxiibbada iyo taageerayaasha.
Waxaa ku jira mawduucyo kala duwan si loo habeeyo arjiga.
Waxay ina tusaysaa kala soocida kooxaha heerka koowaad iyo labaad, Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ...
Iyada oo la adeegsanayo arjiga waxaan kaliya la socon karnaa sharadka, ma sharadayn karno. Quinidroid ayaa diyaar u ah in la soo dejiyo, oo ay ku jiraan xayeysiisyo iyo wax-iibsi-dhex-dhexaad ah.
Developer: Ivan Morales
Codsiga Quiniela wuxuu leeyahay wax ka badan 500.000 oo laga soo dejisto Dukaanka Play iyo a Celcelis ahaan qiimeyn 4.3 xiddigood 5 macquul ah. Waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay Sebtember 2021 (maqaalkan waxaa la daabacay Oktoobar 2021).
Codsigan, waan awoodnaa si toos ah u hubi natiijooyinka barkadaha, maadaama ay noo saamaxeyso inaan si toos ah ula soconno kulamada heerka koowaad, labaad, labaad B iyo saddexaad ee Isbaanishka (marka lagu daro horyaallada kale).
Maxay Quiniela na siiso
Ogeysiisyada tooska ah ee goolasha iyo dhammaadka cayaaraha oo ay weheliso natiijada.
Hubi guulaha barkadaha aan galnay arjiga.
Waxay noo oggolaanaysaa inaan ku wadaagno barkadaha codsiyada farriinta.
Waxaan soo dhoofsan karnaa faylalka tiirka
Waxay na siinaysaa saadaalin ah suurtogalnimada ciyaar kasta.
Macluumaad ku saabsan halka ciyaar walba laga baahiyo.
Waxay ku habboon tahay barkadaha yaryar.
Quiniela, sida Quinidroid, noo ogolaaneysa inaan lasoconno sharadkayaga laakiin aan dhigno iyada oo loo marayo barnaamijka. Barnaamijkan waxaa loo heli karaa soo dejin lacag la'aan ah, waxaa ku jira xayeysiisyo iyo iibsi-dhex-dhexaadinta.
In ka badan codsi si loo ogaado khiyaanooyinka cayaaraha toddobaad kasta, TuLotero waa codsi nwuxuu kuu oggolaanayaa inaad dhigto khamaarka Quiniela si raaxo leh gurigayaga, adigoon saf ugu jirin maamulka bakhtiyaanasiibka ...
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noo ogolaataa uruuri abaalmarinta si toos ah arjiga, sidaa darteed looma baahna inaad u guurto si aad ugu sii wadato sharadka raaxada Quiniela, Bonoloto, Euromillions, Primitiva ... Codsigu kama hayo wax guddi ah abaalmarinnada, sidaa darteed ma jirto marmarsiiyo aan la bilaabin adeegsiga.
TuLotero ayaa diyaar u ah soo dejinta gebi ahaanba bilaash ah, waxaa ku jira wax iibsiga arjiga dhexdiisa si aad u awooddo inaad dhigto sharad iyo in ka badan 500.000 oo la soo dejisto waxay leedahay Celcelis ahaan qiimeynta 4.8 xiddigood 5ta macquul ah.
TuLotero Iibso Bakhtiyaanasiib online
El Quinielista (shabakadda)
Codsiyada ku jira Dukaanka Play -ka ee noo oggolaanaya inaan ogaano saadaasha kulamada Quiniela aad bay u yar yihiinDhab ahaantii, waxaan kaliya doonaynaa inaan helno labada arji ee aan ku xusay maqaalkan, annagoo tixgelineyna kuwa dhowaan la cusbooneysiiyay.
Haddii aan rabno inaan ogaano saadaasha kulamada horyaalka waxaan booqan karnaa shabakadda Quinielista. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u galno boggan shabakadda, waxaan ka heli doonnaa barkadda meesha qiyaasaha ixtimaalka natiijooyinka ee ciyaaraha maalinta xigta.
Ciyaar kasta waxay muujinaysaa saddex boqolleyda lagu kala saaray midabka:
Azul fursado badan oo lagu guuleysto
Rojo waxay muujinaysaa natiijada labaad ee ay u badan tahay
Verde waxay muujinaysaa natiijada ugu yar.
Intaa waxaa dheer, hoosta, waxay na siisaa qiyaas waxa aan kasban karno marka loo eego tirada hits ee aan helno, oo ku saleysan xogta aruurinta iyo jaangooyada maalin kasta, xogta ay tahay inaan gacanta ku galno.
Shabakad kale oo aad u xiiso badan oo ay tahay inaan eegno waa EduardoLosilla, mar aan marin u helno saadaasha ciyaaraha la qaban doono inta lagu jiro dhamaadka todobaadka. Websaydaan wuxuu ku saleeyaa saadaashiisa 4 qaybood oo xog ah:
Boqolleyda lagu ciyaaray quinielista.
Boqolleyda ciyaartoyda LAE.
Boqolleyda itimaalka dhabta ah.
Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa a falanqaynta xaaladda labada kooxood, maaddaama ay ku jiraan kala soocidda, ciyaartoy dhaawacan, cayaarihii u dambeeyay, ciyaartoy diyaarsan ...
Waxay kaloo noo ogolaataa helitaanka kala soocida miiska, halkaas oo aan ku arki karno dhibcaha, kulamada ciyaartoyga, kulamadii adkaaday iyo kuwii laga adkaaday, goolal loo dhaliyey iyo kuwii laga dhaliyay ...
Iyada oo loo marayo shabakadda waxaan sidoo kale awoodnaa si toos ah u sharad adigoon guriga ka bixin. Haddii aad leedahay naadi taageerayaal ah, waxaad u adeegsan kartaa degelkan si aad ugu dhigto khamaarkaaga si ka dhakhso badan, ka sahlan oo ka sarreeya dhammaan habka raaxada leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada qiyaasta ugu fiican ee lagu guuleysto barkadaha
La kulan EZVIZ eLife, kamaradda wifi oo leh batari aad u weyn
6 khiyaamooyinka ugu fiican ee Gardenscapes -ka Android